ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီမပြုလုပ်ခင်သိထားသင့်တဲ့အချက်(၄) ချက် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဧပြီ 20, 2018 Pichit Siriwan, M.D. Suttisun Jankajorn, M.D.
1. ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်ခြင်း
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မှ လိုအပ်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လူနာဆီမှာ ရှိနေတဲ့ အခြေခံအခြေအနေတွေကို ကြိုတင်သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ဖို့ လူနာနှင့် အတည်ပြုပြီးတာနဲ့ ပုံမှန်ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဆစ်မီတဝေ့ မှာတော့ ခွဲစိတ်မှုမစတင်ခင် Pre-operative investigation test ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး အဆိုပါ စစ်ဆေးမှုဟာ ဘယ်လို ခွဲစိတ်မှုမျိုးမဆိုအတွက် အခြေခံဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လူနာတွေဟာ သွေးစစ်ဆေးမှု၊ ရင်ဘတ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း နဲ့ နှလုံးအတွက် EKG Test တွေကို လူနာရဲ့ အသက်အရွယ်ပေါ်မှုတည်ပြီး စစ်ဆေးရပါတယ်။
2. အတွေ့အကြုံမြင့်မားသော ပလတ်စတစ်ဆာဂျင်များ
ဆစ်မီတဝေ့ မှာ ပလတ်စတစ်ဆာဂျင်များဟာ နှစ် ၂၀ အထက် အတွေ့အကြုံရှိသူများဖြစ်ပါတယ်။
3. လူနာ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာဟာ နံပါတ် (၁) ဦးစားပေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Critical Care Complex ဟာ လုံခြုံ စိတ်ချရပြီး ပိုးသတ်သန့်စင်ထားတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းမဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး စံထား သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ကျဆင်းစေတဲ့ ပိုးသန့်စင်ထားတဲ့ ဇုန်တွေ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ ဇုန်တွေ နဲ့ ဘက်တီးရီယားကင်းမဲ့တဲ့ နံရံတွေက ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို လျှော့ချပေးမှာပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်ခွဲစိတ်ခန်းတွေကို လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
4. ခွဲစိတ်မှုပြီး စောင့်ရှောက်မှု
ဆစ်မီတဝေ့ဟာ ခွဲစိတ်ပြီးလူနာ ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့အတွက် ဆေးရုံဆောင်တွေကို ဆန်းသစ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ အဆောင်တွေဟာ လူနာတွေကို စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရန် Dynamic Monitoring ကို သေချာဆောင်ရွက်နေပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး လျှင်မြန်စွာ အကျိုးရှိရှိ နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ကုသပေးနေပါတယ်။
ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီမပြုလုပ်ခင်သိထားသင့်တဲ့အချက်(၄) ချက် ဆစ်မီတဝေ့ မှာတော့ ခွဲစိတ်မှုမစတင်ခင် Pre-operative investigation test ကို ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး အဆိုပါ စစ်ဆေးမှုဟာ ဘယ်လို ခွဲစိတ်မှုမျိုးမဆိုအတွက် အခြေခံဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လူနာတွေဟာ သွေးစစ်ဆေးမှု၊ ရင်ဘတ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း နဲ့ နှလုံးအတွက် EKG Test တွေကို လူနာရဲ့ အသက်အရွယ်ပေါ်မှုတည်ပြီး စစ်ဆေးရပါတယ်။
User rating: 3.50 out of5with 14 ratings